ချောင်ပုလဲပုတီးထုတ်လုပ်သူများ | တရုတ်ချောင်ပုလဲပုတီးစက်ရုံ & ပေးသွင်း
AA16-17mm Big Baroque ပုလဲကြိုးကင်းပုတီးဖြူ, သဘာဝအရောင် Baroque ပုလဲ, Flameball ပုလဲ, Undrilled
Baroque ပုလဲသည်လက်ဝတ်ရတနာဈေးကွက်တွင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအော်ဂဲနစ်ကျောက်မျက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်မျှထူးခြားသည်ကိုကမ္ဘာကိုပြသလိုသည့်သတ္တိရှိသောအမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
15-16mm Big Baroque Pearl Loose Bead၊ ပုလဲလက်ဝတ်ရတနာပြုလုပ်ရန်အတွက်တောက်ပသောအရည်အသွေးကောင်းသည့်ပုလဲ
Baroque ပုလဲဆိုတာဘာလဲ ငါမကြာသေးမီကဤမေးခွန်းကိုမေးတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အဖြေဒါဟာပုံသဏ္aboutာန်နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ Baroque ဟူသောစကားလုံးသည်ပုလဲ၏ပုံသဏ္technicalာန်ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြသည်။
AAA 13-14mm ဒင်္ဂါးပြားပုလဲ၊ သဘာဝအဖြူရောင်ရေချိုပုလဲ၊ ယဉ်ကျေးသောပုလဲများ၊ တူးထားသောပုလဲပုတီးများ
ဤရွေ့ကားသင့်ရဲ့လက်ဝတ်ရတနာချမှတ်ခြင်းများအတွက်လှပသောအကြွေစေ့ပုလဲဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုပုလဲလည်ဆွဲ၊ လက်ကောက်နှင့်ကွင်းများသို့မဟုတ်လက်ဝတ်ရတနာအလှဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တူးဖော်ခြင်း၊ တဝက်တူးခြင်းသို့မဟုတ်တူးဖော်ခြင်းများကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
AAA 12-13mm White Drop Coin ပုလဲ၊ အဖြူ Teardrop ဒင်္ဂါးပြားပုလဲပုတီးနားကပ်သည်
အကြွေစေ့ပုလဲသည်ပြားချပ်ချပ်ယဉ်ကျေးသောပုလဲဖြစ်သည်။ ထိုပုလဲသည်နေ့ခင်း၌အလိုအလျောက်ဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးညနေခင်း၌ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျက်သရေကိုခံစားနိုင်သည်။ ပြားချပ်ချပ်ခလုတ်များသို့မဟုတ်ဒင်္ဂါးများကဲ့သို့ပုံစံမျိုးဖြင့်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောဒင်္ဂါးများနှင့်ပုလဲများသည်လှပသောပုလဲနှင့်အတူထွန်းလင်းလိမ့်မည်။
AA 1.5mm-2mm Natural White Tiny Seed ရေချိုပုလဲပုတီး၊ စစ်မှန်သောရေချိုပုလဲ
ဟုတ်တယ်၊ ဒီပုလဲတွေကတကယ်ပဲ! လှပသောပုလဲအလွန်သေးငယ်လာ! zhuji လက်ဝတ်ရတနာများကဲ့သို့ပင်ထိုပုလဲများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ပုလဲမွေးမြူရေးခြံများမှရင်းမြစ်ဖြစ်သောစစ်မှန်သောပုလဲပုလဲများဖြစ်သည်။
AAA ၁.၅ မီလီမီတာမှ ၂ မီလီမီတာရှိသောသဘာဝအဖြူရောင်မျိုးစေ့ရေချိုပုလဲပုတီး၊ စစ်မှန်သောရေချိုပုလဲပုတီး
ကျွန်ုပ်တို့သည်မျိုးစေ့ပုလဲပုတီးစေ့အမျိုးမျိုးကို - သေးငယ်သောခလုတ်ပုလဲများ၊ မျိုးစပါးဆန်ပုလဲများ၊ ပတ်ပတ်လည်ပုလဲသေးများ၊ သဘာဝအရောင်မျိုးစေ့ပုလဲကြိုးများ - ကိုပေးသည်။
AAA ၁၆-၁၈ မီလီမီတာ Big Baroque ပုလဲကြိုးပုတီးစေ့၊ အဖြူ Flame Ball Pearl, Baroque ပုလဲပင့်ကူ၊ Baroque မွေးမြူထားသောရေချိုပုလဲ
Baroque ပုလဲသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောစက်လုံးမဟုတ်သည့်ပုလဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပုံသဏ္aာန်သည်သန္ဓေတည်ချိန်အနည်းငယ်မှကွဲပြားသည့်ဘဲဥပုံ၊ ကွေး၊ extruded သို့မဟုတ်ကြီးမားသောပုံသဏ္toာန်အထိရှိသည်။
စစ်မှန်သောစိုက်ပျိုးရေချိုပုလဲ, Aaa ရေချိုပုလဲ, White Grey ရေချိုပုလဲ, သတို့သမီးပုတီး, ပုလဲလုံးနားကပ်, ရေချိုပုလဲသတို့သမီးလက်ဆောင်ပေးမယ်,